Notapahana nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny 17 martsa 2021, ny tetikady manampy ny fepetra efa misy iadiana amin’ny fihanaky ny Covid-19.
Tapaka fa :
- Mila hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra mikasika ny elanelana, ny fitondrana aro vava-orona, ny fanasana tanana, ny fanadiovana ny toeram-ponenana, ny fanadiovana sy fanondrahana fanafody ireo fiara fitateram-bahoaka ;
- Raràna ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 200 ;
- Ny fifaninanana ara-panatanjahantena rehetra dia tsy azo asiana mpanatrika ankoatra ireo izay mahazo fahazoan-dalana manokana ka tanterahana an-kalamanjana ;
- Ferana ny olona afaka mandevina tsy mihoatra ny 10 raha maty vokatry ny Covid-19 ilay maty ;
- Arahana ny fivezivezen’ny mponina anaty fitateram-bahoaka ;
- Fizarana ny CVO tambavy isaky ny fokontany, sy fanapariahana ny CVO Plus, ka ny ministera isan-tokony dia omena alalana hividy izany eny amin’ny Pharmalagasy avy hatrany ;
- Hiverina hiasa ny BIS (Bataillon d’Intervention Spéciale) amin’ny fakàna ireo marary, fitsidihana any an-tokantrano ary ny fanarahana ireo marary, na amin’ny alalan’ny antso an-tariby na amin’ny alalan’ny fanarahana ny fiombon’ny aretina ;
- Hiverenana hampiasaina ny Plate-forme COVDATA hanarahana sy hamaritana ny toerana hahafahana mandray ireo marary sy ny fivoaran’ny toe-pahasalaman’izy ireo, ary hanarahana ny fipariahan’ny valanaretina eto Madagasikara ;
- Haverina ny fiaraha-miasa amin’ireo mpitsabo tsy miankina ao anatin’ny Holafitry ny Mpitsabo, amin’ny fanaovana “consultation sy orientation en ligne”, ny fanarahana ny marary mijanona any an-tokantrano ary ny fitsaboana amin’ny alalan’ny antso an-tarib ;.
- Tsy mbola misokatra amin’ireo mpizahatany sy ireo olona avy any amin’ny tany atao hoe “pays à risque” any ivelany i Madagasikara ;
- Mbola mitoetra avokoa ireo fepetra rehetra napetraka tany aloha izay tsy nasiam-panafoanana manodidina ny fisorohana ny fihanaky ny valanaretina.